jersey jira Factory | China jezi jira Vagadziri, Suppliers
DTY polyester mesh lining jira rine diamond meshes
DTY polyester perforated mesh jira
Polyester single jersey jira
Polyester spandex yakatambanudza jersey yakarukwa jira
Polyester spandex perforated hove yeziso mesh jira
Polyester spandex yakatambanudza butterfly mesh jacquard fa...
Cationic polyester spandex mélange jersey jira
Heather Jersey akaruka mélange jira rakatambanudzwa
88 ATY polyester 12 spandex single jersey jira reyoga legging
Tsanangudzo Iyi polyester spandex jersey jira rakarukwa, chinyorwa chedu nhamba HS2103, yakarukwa ne88% polyester uye 12% spandex. ATY, zita rakazara imhepo yakashongedzwa shinda, inotsiva yakanakisa yeruwoko rwekugadzira rwenhema dzakamonwa shinda. Machira eATY ane ruoko rwakaita sedonje anonzwa achichengetedza zvakanakira uye mabasa emafiber ekugadzira. Panguva imwecheteyo, haina zvakawanda zvekukanganisa kwemubhedha ...
87 Polyamide aty 13 elastane yakatambanudza yoga jira re leggings
Tsanangudzo Iri jira re polyamide spandex, nhamba yedu yechinyorwa HS2102, yakarukwa ne87% polyamid uye 13% spandex. ATY, zita rakazara imhepo yakashongedzwa shinda, inotsiva yakanakisa yeruwoko rwekugadzira rwenhema dzakamonwa shinda. Machira eATY ane ruoko rwakaita sedonje anonzwa achichengetedza zvakanakira uye mabasa emafiber ekugadzira. Panguva imwecheteyo, haina zvakawanda zvekukanganisa kwekotoni, senge shrin ...
Cottony ruoko-inonzwa 87% polyester ATY 13% spandex yakatambanudza legging jira
Tsanangudzo Yechigadzirwa: Iyi ATY polyester spandex jira rejira, chinyorwa chedu nhamba HS2101, yakarukwa ne87% Polyester uye 13% Spandex. ATY, air textured warn, ishinda yakasanganiswa yakagadzirwa kuburikidza nemhepo jet texturing process. Machira eATY ane ruoko rwakaita sedonje anonzwa achichengetedza zvakanakira uye mabasa emafiber ekugadzira. ATY mutsetse unobudirira kusanganisa shinda dzakasiyana kuti ipe huwandu hukuru hwe ...
100% Polyester imwe jezi rakarukwa jira remitambo uye t-shirt
Tsanangudzo Yechigadzirwa: Iri jira repolyester jersey, chinyorwa chedu nhamba HS230, yakarukwa ne100% polyester. Jira rejezi rimwechete rine chitarisiko chimwe padivi rechiso uye chakasiyana chiri kumashure. Micheto inomonereka kana kukunguruka. Uye kureba muhupamhi hunenge kaviri pane kureba. Jersey machira maficha kuve akapfava uye akasununguka kumuviri. Jezi rimwechete rakarukwa jira ndiro rinonyanya kushandiswa kugadzira T...
Yakapfava polyester naironi spandex 4 nzira yakatambanudza jezi rimwe chete rakarukwa jira rezvipfeko zvemitambo
Tsanangudzo Yechigadzirwa: Iri jira repolyester naironi spandex jersey, nhamba yedu yechinyorwa HS614, yakarukwa ne34% polyester, 55% naironi uye 11% spandex. Iri jira rakatambanudzwa rejezi rimwe rine ruoko rwakapfava, uye rinofema, rinoita kuti unzwe kutonhorera kana wakapfeka. Iri jezi rakarukwa jira ipolyester, naironi uye spandex misanganiswa, inosanganisa zvakanakira zvese naironi uye polyester. Yakasununguka uye ine zvakanaka s ...
High quality polyester spandex single jersey rakarukwa jira rezvipfeko zvemitambo
Tsanangudzo Yechigadzirwa: Iyi spandex jezi rakarukwa jira, chinyorwa chedu nhamba HS069, yakarukwa ne92% polyester uye 8% spandex. Iri jezi rimwechete rakarukwa jira rakapfava, rinotambanuka, uye rinofema. Yayo yemvura inodonhedza uye yakatambanudzwa zvinhu inoita kuti jezi rakarukwa jira rive rakakwana pakugadzira madhirezi anoyerera, zvipfeko zvemitambo, jezi remitambo, zvipfeko zvekurovedza muviri, leggings, uye bhuroka yemitambo. Tinogona kugadzira akasiyana mabasa ejira maererano necustom...
Polyester spandex elastic stretch lycra single jersey jira rehembe
Tsanangudzo Yechigadzirwa: Iri jira rejezi repolyester spandex, nhamba yedu yechinyorwa HS004, yakarukwa ne90% polyester uye 10% spandex. Iri jezi rimwechete rakarukwa jira rakapfava, rinotambanuka, uye rinofema. Yayo yemvura inodonhedza uye yakatambanudzwa zvinhu inoita kuti jezi rakarukwa jira rive rakakwana pakugadzira madhirezi anoyerera, zvipfeko zvemitambo, jezi remitambo, zvipfeko zvekurovedza muviri, leggings, uye bhuroka yemitambo. Tinogona kugadzira akasiyana mabasa ejira zvinoenderana ne...
60% Polyester 40% donje jena jezi rakarukwa machira emitambo
Tsanangudzo Yechigadzirwa: Iri jira rejira redonje rejira, chinyorwa chedu nhamba HS737, yakarukwa ne60% polyester uye 40% donje. Iri polyester donje jersey rakarukwa jira rine ruoko rwakapfava kunzwa. Ndiko kutengesa kwakanyanya kupisa kwezvigadzirwa zvedu. Iine hunyoro hwekotoni uye kugona kwepolyester kusimba. Iyo mechanic elastic uye yakagadzikana, inoita kuti ive jira rakakodzera kwazvo kune ese marudzi ezvipfeko zvemitambo Iyi jezi rakapfava rekotoni ...
Nyowani dhizaini mitsetse cationic yakatambanudza jersey jira rezvipfeko zvemitambo
Tsanangudzo Yechigadzirwa: Iyi cationic polyester spandex jira, chinyorwa chedu nhamba HS177, yakarukwa ne48% polyester, 40% cationic uye 11.5% spandex. Iri jira rejezi rakatambanudzwa rine ruoko rwakapfava kunzwa uye dhizaini yemutsara inoita kuti jira ritaridzike rakakosha. Tinogona kugadzira mavara akasiyana musanganiswa. Iyo yakasununguka uye yakanyanya kutambanudza, iyo inoita kuti ive jira rakakodzera kwazvo kune marudzi ese ezvipfeko. Iyi cationic jira ...
83 Polyester 17 spandex single jersey jira rine digital kudhindwa
Product Parameters: Iri polyester spandex jersey jira, chinyorwa chedu nhamba HS658, yakarukwa ne83% polyester uye 17% spandex. Iri jira rakadhindwa redhijitari rine ruoko rwakapfava rwunonzwa nemagadzirirwo akanaka. Tine edu magadzirirwo ekudhinda pamucheka, iwe unogona zvakare kugadzirisa zvinoenderana nezvaunofarira kana kushandisa akawanda graphic dhizaini zvirongwa kugadzira madhijitari edhijitari. Iine chiitiko chakanaka chekupfeka. Iyo elastic uye com ...
Polyester uye spandex inotonhorera melange jersey jira rezvipfeko zvemitambo
Zvigadzirwa zveParameters: Iyi polyester spandex jersey jira, chinyorwa chedu nhamba HS248, yakarukwa ne90.4% polyester uye 9.6% spandex. Iyo polyester spandex melange jersey jira rakarukwa nemusanganiswa wefibers dzakachinjika dhayi kugadzira melange mhedzisiro. Iyo melange jersey jira rinoratidza akawanda mimvuri yegrey kana grey ine rumwe ruvara. Kune anotevera heather mavara anowanikwa kune yedu melange jersey jira ...
Anti-bacterial cotton polyester single jersey jira rekushanda rinopfeka
Tsanangudzo Yechigadzirwa: Iri jira repolycotton, nhamba yedu yechinyorwa HS412, yakarukwa ne60% donje uye 40% polyester. Tinogona kugadzirisa kuumbwa sezvaunoda. Iri jira repolyester donje rejezi rimwechete rine ruoko rwakapfava. Iyo yakagadzika ne mechanical elastic, iyo inoita kuti ive jira rakakodzera zvikuru kune marudzi ose ekupfeka anoshanda. Iri jira reCVC rinogadzirwa nemuchina wekuruka weft. Nemhando yepamusoro uye yakapfava...
Polyester uye nylon zvinoshandiswa zvakanyanya muzvipfeko zvakasiyana-siyana muhupenyu hwezuva nezuva uye zvakabatana zvakanyanya nehupenyu hwedu. Ichi chinyorwa chinoda kusuma sei ...